Global Voices teny Malagasy » Egypta: Ny Tranonkalan-gazety El Koshary · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 21 Marsa 2018 3:46 GMT 1	 · Mpanoratra Eman AbdElRahman Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Ejipta, Fahalalahàna miteny, Mediam-bahoaka, Tanora, Zavakanto & Kolontsaina
Nanoratra tao amin'ny bilaogin'izy ireo momba ny fanokafana ny “sampana fampahalalam-baovao azo antoka indrindra” ao Egypta antsoina hoe “El Koshary Today ” i Zeinobia , Tarek Shalaby  ary i Hossam El Hamalawy . Tamin'izany fomba izany no nanoritsoritan'ny ekipan'ny El Koshary ny tranokalam-baovaon'izy ireo. Tranonkalam-baovao iray amin'ny teny Anglisy izy io izay mampiasa teny fanesoana sy famisavisana mba hanairana ny sasany amin'ireo olana goavana (na tsy dia lehibe loatra) atrehan'ny Egyptiana. Ekipa tanora Egyptiana no miasa ao ambadiky ny El Koshary ary samy manao ezaka mafy ny tsirairay avy ary mitondra fomba fijery samihafa ihany koa. Nisafidy ny tsy hitonona anarana izy ireo (tamin'ny fotoana nanokafana ny tranonkala).
Sakafo nentim-paharazana malaza ao amin'ny firenena Egyptiana ny Koshary , izay ahitana vary, tsiasisa mena, voanjobory, macaroni, ary norarahana tongolo lay sy vinaingitra, ary saosy voatabia masiaka. Noravahana tongolobe nohamamiana ny teo ambonin'ity foto-tsakafo ity.
Manazava  i Shalaby hoe:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/03/21/116462/
 “El Koshary Today: http://www.elkoshary.com/